Wararka Maanta: Talaado, Oct 30, 2012-Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee ku sugan Kismaayo oo howlgallo ay sameeyeen kusoo qab-qabtay walxaha Qarxa
Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ee ku sugan Kismaayo oo howlgallo ay sameeyeen kusoo qab-qabtay walxaha Qarxa Talaado, Oktoobar 30, 2012 (HOL) —Howlgallo ay saaka sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayay ku guuleeysteen in ay soo saraan Miinooyin dhowr ah oo lagu aasay qaar kamid ah wadooyinka dhexmara magaalada Kismaayo.
Ciidamadan ayaa saaka howlgalkooda ka bilaabay qaar kamid ah xaafadaha magaalada Kismaayo, waxayna ku guuleeysteen in ay gacanta ku dhigaan ilaa dhowr Miino oo lagu aasay wadooyinka dhexmara Magaalada.
Goobjooge codsaday in aan magaciisa la xigan ayaa HOL u sheegay in ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Kenya islamarkaasina wata qalabka lagu baaro Miinada ay saaka ilaa dhowr Miino kasoo saareen qaar kamid ah wadooyinka dhexmara magaalada.
Saraakiil katirsan ciidamada dowladda oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabasaday in ay faahfaahin ka bixiyaan howlgalkii saaka, haseyeeshee waxay inoo xaqiijiyeen in ciidamadu ay ku guuleeysteen in ay soo bixiyaan Miinooyin Dhowr ah oo lagu aasay wadooyinka magaalada dhexmara.
Howlgallada ay ciidamadu kusoo qabteen walxaha qarxa ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaan qarax nooca Miinooyinka dhulka lagu aaso ah lala beegsaday goob maqaaxi ah oo ku taal iridda laga galo xarunta Degmada Kismaayo, kaasoo sababay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii Maqaaxida ku sugnaa.
Talaado, Oktoobar 30, 2012 (HOL) — Hal qof ayaa ku dhintay laba kalena dhaawac ayaa kasoo gaaray rasaas uu askari ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ku furay barqonimadii maanta gaari kuwa rakaabka qaada ah oo marayay meel ku dhow isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho. Kenya oo ugu baaqday Xukuumadda Eritrea inay taageerto Nabadda Geeska Afrika ka hor inta aysan dib ugu biirin IGAD 10/30/2012 4:12 AM EST